‘अमेरिका बोइज’ को ट्रेलर आयो, हेर्नुस् कस्तो छ ? « Ramailo छ
‘अमेरिका बोइज’ को ट्रेलर आयो, हेर्नुस् कस्तो छ ?
फिल्म ‘अमेरिका बोइज’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ । अर्पण थापा, सुनिल थापा, सन्दिप छेत्री, हरिहर शर्मा, कामेश्वार चौरासिया स्टारर फिल्मलाई प्रवेश पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् । प्रोमो हेर्नुस् :
सीबर्ड्स पिक्चर्स र बडी इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा प्रकाश भुजेल र इन्द्र प्रशाद खरेलले निर्माण रहेको यो फिल्ममा अभय बराल, आशिष प्रसाईं सृष्टि कार्की, सारदा गिरी, रश्मि भट्ट, रमा थपलिया सुवाश गजुरेल, राजु खरेल मनिष राउत लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । फिल्मका कार्यकारी निर्माता समिर खरेल हुन् भने सह निर्माताका रुपमा अनुप थापा यमुना खरेल र राज के.सी रहेका छन् ।
विवेक पाण्डेको फिल्मको कथा, पटकथा तथा सम्वाद रहेको फिल्ममा आलोक शुक्लाको छायाङ्कन र निमेष श्रेष्ठको सम्पादन छ । सम्राट बस्नेतको द्वन्द रहेको फिल्मको कोरियोग्राफर सुनिल छेत्री र नेपाली ठिटोज हुन । फिल्मको प्रदर्शन मिति जेठ १८ गतेलाई तोकिएको छ ।